Kubatana - Archive - Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions - Week 2 - Shona - Kubatana.net - May 2010
Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 2 - Shona
1. Nyaya yekodzero dzekuva mwene wevhu yatingati muchirungu "land tenure" ichagadziriswa sei mubumbiro idzva remitemo.
Ngatitange tanyatsoona kuti kana tichiona kuti minda tinoirima sei zvakamira sei, pane vakapiwa minda nehurumende iya yakatorwa nechisimba vachipiwa tsamba yekuti vaende kunorima ipapo, tsamba iyoyo ichimupawo dziviriro. Kozoita vanhu vaya vane minda yavo vane atinoti ma "title deeds" yekuti munhu akadaro anokwanisa kuita zvake zvaanoda. Koita isu vekumaruzevha tisina kunge tawanawo minda yakapiwa vamwe. Asi minda iyi iri pasi pemaKanzuru kana pasi pemadzishe. Chiri kunetsa ndechekuti munhu anofanira kuti azive kuti achagara pamunda wake kwenguva yakareba zvakadini, zviri kunetsa nekuti kana uine "offer letter" iya, hongu inokwanisa kupa 99 years asi inokwanisa kukubvisa panzvimbo kana mangwana. Saka tinoda kuti vanhu vari paminda vazive kuti vachagara pamunda iwoyo kwenguva yakareba sei pasina munhu anouya kunovanetsa. Zvinoita kuti munhu agonewo kuronga chimwe chinhu pamusoro pemunda iwoyo, zvakaita sekuvaka madhamu, dzimba nezvimwe zvakadaro sezvo anenge achiziva kuti akasununguka.
Takasakwanisa kudaro vanhu havachakwanisa kurima vakadekara, hatichakwanisa kusimudzira upfumi hwenyika. Saka pakunyora bumbiro ngadionei kuti vanhu vanogona kurima, kwete munhu wesewese zvake, asi vanogona kurima, vanyatsokwanisa kuti vagare panzvimbo kwenguva yakaringana vachiwanawo rubatsiro pakurima kwavo.
2. Tingaite sei kuti veCOPAC vasave vaine bato ravakarerekera?
Kuti vaite zvavaoda zvisiri zvedu zvinovati netsei, ndinodaro nekuti Committee inevanhu makumi maviri nemashanu vemapato akasiyana. Vanotozongokwanisa kuita zvavanoda kana vakabvumirana vose muchikwata chavo ichochi. Asi nekuti vari kubva kumapato akasiyana siyana, kuti vagotinyengedzera zvinonetsa nekuti zvinenge zvava kureva kuti mapato ose iwaya abvumirana kunyengedzera. Handifungi kuti zvingagoneke zvakadaro nekuti mapato acho anosiyana mupfungwa nemukuita. Tobva ipapo kune chikamu chinonzi "Management Committee" nechinonzi "Steering Committee", zvose zvine chekuita nekunyorwa kwebumbiro. Saka Committee yeCOPAC iyi haigone kuva yakasununguka zvachose kuita zvainoda, pane pamwe panopindirawo ve "Management Committee" ne "Steering Committee". Saka tinovimba kuti hazvisi nyore kuti vakwanise kuzongoti vava kuita chinoti chiri kunze kwezvinotarisirwa. Listen
3. Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kune vanhu vakati wandei kusanganisira veKwaMutare neKuchipinge. Vari kuti, zvichaitwa sei kuti vanhu vanzwe kusununguka kutaura maonero avo nezvavanoda mubumbiro remitemo, sezvo vamwe vedu tava kutosangana nedambudziko rekutyisidzirwa?
Vamwe vari kuti pane boka riri kufamba richiti, kana vanobvunza vauya, pindurai muchiti zvakati nezvakati. Haungati boka iroro rirege kuita zvariri kuita nekuti ndidzo pilitics dzacho. Asi kunenge kuri kutyisidzirwa kana boka rikauya richiti "tinoda kuti mugoti zvakati, kana makarega tozokurovai kana kukudzingai munzvimbo". Vachauya kuzobvunza vanotarisirwa kuti vagove vaine mapurisa, panotarisirwa kuti pagove nemapurisa mashano pamusangano wega wega. Hongu panenge pane mapurisa asi tinoda kutiwo vanhu vasatyisidzirwe tabva pamusangano iwoyo. Tinokurudzira vatungamiriri vemapato kuti vagoudza vanhu vanovatevera kuti kutyisidzirana hakutenderwe. Kuvanhu, tiri kuti, regai kushandiswa kutyisidzira vanhu zvisina maturo sezvo hapana chamunowana kubva pazviri.
Ndakazviona kuti vazhinji vacho vanenge vachityisidzira vanhu ivava, iye zvino vamwe vachingori marombe, chavakapiwa hapana. Saka munhu ngaazvicherechedze izvozvo kuti pane zvaanowana here. Tinokarirawo kuti mapurisa achaita basa rawo nemazvo kwete zviya zvekuti 'iyi nyaya ndeye politics, yabva kubato rakati', dai tasiyana nazvo tione kuti taita mitemo yedu zvinounza runyararo muZimbabwe. Pane bazi rinonzi re "National Healing" tinotarirawo kuti bazi iroro riite zvarinogona kuti patinopedza misangano iyi, vanhu vange vachigara zvakanaka. Bazi iroro nemapurisa edu vanofanira kuita basa ravo kwete nekuti kuri kunyorwa bumbiro remitemo, asi nekuti vari kuita basa kubva nhasi kusvikira narini.
Tinokurudzira kuti mumaruwa vanhu tigare zvakanaka zvisineyi nekusiyana kwemapato atinodzigira. Listen
4. Mubvunzo vedu wanhasi uri kubva kune vanhu vakawanda kusanganisira Wellington naKudzanai, vanobvunza kuti, Bumbiro remitemo rachati kuti maringe neyatingati muchirungu "Executive branch"? zvichibvira kuti, mutungamiri wenyika anofanira kuve nemakore akawanda zvakadini, akachungamira kwenguva yareba zvakadini, uye kuchava here nezvigaro zviviri chaPresident na Prime minister?
Ndinoda kukutaurirai kuti zvandiri kutaura, handisi kuti ndizvo zvamunofanira kuti mutaure kwete asi ndizvo zvandinofungawo kuti pamwe zvingatiitire zvakanaka. Asi zviri kwamuri imimi vanhu veZimbabwe kuti muchapindura mubvunzo uyu muchiti kudii kana mabvunzwa. Ngatitangirei pabumbiro ratii naro nhasi uno reku "Lancaster House". Bumbiro iroro rinoti munhu ari panyanga ndiPresident, hezvo tobvapo toenda kuchibvumirano chakaitwa musi wa15 Septemder chakaita kuti kugove naPrime Minister. Chibvumirano ichi chinoti masimba ari muvanhu vatatu, muna President, Prime minister nekanzuru yake, uye ari kuCabinet. Asi ukanyatsoongorora unoona kuti masimba a president nea Prime Minister, anenge akangodzonyongodzwa dzonyongodzwa. Hazvinyatsooneki kuti Preident vanotangira papi vachisvika papi, Prime minister vanotangira papi kusvika papi, Cabinet, uye Council of ministers zvinotangira papi kusvika papi.
Saka zvatinofanira kuita, ngationei kuti tiri kuda here President naPrime Minister. Asi ini ndinotiwo veduwe, kana tichiona kuti upfumi wenyika yedu haugone kuchengeta zvigaro zvizhinji zhinji, uye zvigaro zvacho hazvinyanyobatsira, ngationei kuti tive nemunhu mumwe chete. Ndinoona kuti ngatiive naPresident bedzi, asi takavawo nevaviri, ngatisave nemunhu anogara pachigaro kusvika madhongi amera nyanga. Ngatiive nevanhu vanogara pachigaro kwenguva yatinotema isu, ingava ma"term" maviri. Kana nguva iyi yapera munhu anozorora zvake vamwe vowana mukana wekuedzawo zvavanogona. Hongu zvakaitika zvazvo tichishandisa bumbiro redu reLancaster iri, asi handione sekunge zvakanyanya kutibatsira senyika. Kana tava nemunhu anotitonga ngationei kuti masimba haasi ake ose, tione kuti mamwe ayenda kumaruwa. Uye toonawo kuti hatisi kupa masimba eumbimbindoga kuvatungamiri. Ngationei kuti taitawo rimwe bazi rinokwanisa kutsiura nekudzoreredza mutungamiri wenyika. Listen
5. Mubvunzo wedu wanhasi uri kubva kuna Mashasha, anobvunza kuti, Ndeupi mutemo watingaise mubumbiro idzva unoita kuti maMember of Parliament vave accountable kune vanhu vavanomiririra, zvingagone here kuti paitwe ma "Recall votes" kana MP asiri kuita zvinotigutsa?
Pane paviri patingaone kuti tinokwanisa kuti kana makore ake asati akwana tinogona kumuti dzoka titsvake mumwe. Pane pekuti munhu uyu apinda muParamende achiti ndiri wekubato rakati. Boka iroro rine mitemo yaro, kana agara kwechinguva oona kuti haachapindirana nemitemo yeboka iroro, ava kuda kuenda kune rimwe boka idzva. Kana zvadaro ndinofunga kuti munhu akafanira kuti adzokere kuvanhu vakamuvhotera kuti navo vave nechekuita. Mutemo uripo ikozvino unoti mukuru webato remunhu iyeyo ndiye chete anoyenda kuna"Speaker" weparamende otaura kuti munhu abva kubato rake ava kune rimwe, apa vanhu vakavhota havana chekutaura pazviri. Saka ndinofunga kuti pakadaro vasarudzi ndivo vanofanirwa kuti vabvume kana kuti vagoda zvavo kutsvaga mumwe munhu.Semuenzaniso, tinoona kuti vaJonathan Moyo vakambopinda vachiti vakazvimirira vega, iye zvino vava kuZANU PF. Asi vanhu vekuTsholotsho pada vakavavhotera nekuti vaisada munhu weZANU PF, saka ndinofunga kuti kana munhu angodaro anofanira kudzokera kuvanhu vake.
Pechipiri ndepekuti vanhu vanongoti vava kuda mumwe munhu pachigaro pada nekuti Havana kufara nemashandiro emunhu wavasarudza. Ipapo panonetsa nekuti zvinonetsa kuti vanhu muve nechinobatika chamungati MP atadza. Zvingaitika bedzi kana nyika yakati yava nema "development funds' ekuti MP anopiwa nehurumende kuti aite development kunzvimbo yake. Vanhu vozoti vasina kugutsikana nemashandisirwo emari iya, ndipo pavangati vava kuda mumwe munhu. Pari zvino zvakati womei. Listen